🥇Best SEBI Regulated Brokers | Full Learn2Trade Guide July 2022
အကောင်းဆုံး SEBI မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ပွဲစားများ 2022 - သင်ကြားမှု2ကုန်သွယ်မှု
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24 မေလ 2022
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Securities and Exchange Board (SEBI) သည်ပါလီမန်အက်ဥပဒေ၏နောက်ကွယ်မှမွေးဖွားခဲ့ပြီးအိန္ဒိယရှိဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာနေရာအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယတွင်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် FEMA အက်ဥပဒေအရရောင်းဝယ်မှုမရှိသောပြစ်မှုဟုယူဆရသည်။ ထိုအတွဲနှစ်ခုရှိအခြေခံငွေကြေးသည်ရူပီးမဟုတ်လျှင် (ထိုကိစ္စတွင်တရားဝင်) ဖြစ်သည်။
ဘဏ္cornerာရေးအပြောင်းအလဲရှိလာပြီဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေပြီး Reserve Bank of India (RBI) အနေဖြင့်၎င်း၏အကန့်အသတ်များကိုပြုပြင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အပြောင်းအလဲမရှိသေးသောကြောင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ဖြစ်နေသည် (အခြားနိုင်ငံများမှကဲ့သို့) ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဂုဏ်ပြုသော SEBI ပွဲစားများသည်ရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ အလားတူစွာအချို့သောကုန်သည်များကအိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလက်ခံသည့်ကမ်းလွန်ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်စဉ်းစားဘို့အကောင်းဆုံး SEBI ပွဲစား5တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပွဲစားတစ် ဦး ရွေးချယ်ရာတွင်မည်သို့ရှာဖွေရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်သောင်းကနင်းသောဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များသည်စည်းမျဉ်းများကိုအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခဲ့ကြပြီးကုန်သည်များခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်အရိပ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များသည်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကိုမပြုခဲ့ကြပါ။ ဤသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သောဘဏ္spaceာရေးနေရာ၌ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ် SEBI အက်ဥပဒေမတိုင်မီကအိန္ဒိယဘဏ္financialာရေးဈေးကွက်ကို CCI (Capital Issues of Controller) ကထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၏ Capital Issues Act သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်မြန်မြန်ရှေ့သို့တက်။ SEBI ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဈေးကွက်အလယ်အလတ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်။ အမှန်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာစာကိုလိုက်နာဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနေရာချပြီးလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာကုန်သည်များအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသောစျေးကွက်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်ပွဲစားများအားအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်တာဝန်ခံမှုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထိုအဖွဲ့သည်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်ရှိဘဏ္conductာရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အားကာကွယ်ပေးသည်။
လိုင်စင်ရပွဲစားများအားလုံးလိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများစာရင်းရှိပြီး FCA, ASIC, CySEC နှင့်အခြားသောစည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်တူညီသောအခြေခံမူများသည်အတူတူဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အဓိကပန်းတိုင်မှာဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များပိုမိုလုံခြုံစေရန်ဖြစ်သည်။ ပွဲစားများသည်အသေးစိတ်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကိုခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
SEBI ကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းဥပဒေများသည်ပွဲစားများနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုချက်အချို့အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းပြချက်ကိုအတူတကွစုစည်းထားပါသည်
အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်လျှင်ပြက္ခဒိန်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၊ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ သို့ပြောပါကပွဲစားသည်ငွေမှမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုစုံစမ်းရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေအဖွဲ့သို့အစီရင်ခံစာတင်ရန်လိုအပ်သည်။
KYC (သင်၏ဝယ်သူအားသိရှိခြင်း) စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားများကိုဒဏ်ငွေပေးရမည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောမည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆို KYC စည်းမျဉ်းများအရဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရမည်။
ပွဲစားအတွက် KYC ၏အဆင့် (၄) မှာ -
သုံးစွဲသူတိုင်း၏ အမည်၊ လိပ်စာနှင့် ဓာတ်ပုံ ID ကို ရယူခြင်း။
ဖောက်သည်၏ အချက်အလက် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း/ ၎င်းတို့သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို အတည်ပြုခြင်း။
ဖောက်သည်၏ ကုန်သွယ်မှု အားထုတ်မှုကို ကြီးကြပ်ပါ။
ဆိုက်တစ်ခုမတိုင်မီကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် KYC ကိုဖြတ်ခဲ့ကြရသော်လည်း၎င်းသည်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသင်မသိခဲ့ပေ။ ဤစာရင်းတွင်ပါရှိသည့်စည်းမျဉ်းအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပိုမိုလုံခြုံသောနှင့်ရှင်းလင်းသောကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
ဘဏ် / ရန်ပုံငွေစာရင်းခွဲခြားထားမှုမှာဆယ်စုနှစ်လေးခုခန့်ရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်လိုက်နာရန်အခြားစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာပွဲစားကုမ္ပဏီများသည်၎င်းကိုထောက်ခံရန်လစဉ်အစီရင်ခံစာများကိုတင်ပြရမည်။
အဓိကအချက်မှာပွဲစားများသည်သင်၏အရင်းအနှီးကိုကုမ္ပဏီ၏အကောင့်ထဲသို့သီးခြားအကောင့်တစ်ခုထဲထည့်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်စီးပွားရေးမှထွက်သွားပါကသင်၏ငွေကိုအကြွေးအဖြစ်မယူဆောင်နိုင်ဘဲငွေကြေးရာဇ ၀ တ်မှုမှအကာအကွယ်ပေးသည်။
SEBI သည်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံရေးအလွဲသုံးစားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အပိုဆောင်းစနစ်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စနစ်သည်အွန်လိုင်းတွင်အခြေစိုက်ပြီးဖောက်သည်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်၎င်းတို့မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ကုန်သွယ်မှုအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိုလှောင်ရုံများ၊ ဖလှယ်မှုများနှင့်ကုမ္ပဏီများမှစုဆောင်းထားသည့်အာမခံများလည်းပါဝင်သည်။ ထို့နောက် SEBI သည်အချက်အလက်များကိုအသွင်ပြောင်းထားသောအကောင့်နှင့်နောက်နေ့ပွဲစားမှအချက်အလက်တင်ပြခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
SEBI ပွဲစားများသည်တရား ၀ င်နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ သတိပြုပါ၊ အားပြိုင်မှုသည်ကျပန်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ပြီး ဦး ထုပ်တစ်ချောင်းတွင်အောက်ပါအချက်အလက်အချို့ကိုကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားထားသော ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (ပမာဏအပါအဝင်)။
margin ကုန်သွယ် ဂဏန်း။
အခကြေးငွေ အပြည့်အစုံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အသုံးပြုပြီး ကမ်းလှမ်းထားသည့် မည်သည့် leverage မဆို ရှင်းလင်းချက်။
စစ်ဆေးခြင်းသည်မပြည့်စုံကြောင်း (သတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးနေသည်) ကိုတွေ့ရှိပါကထိုအဖွဲ့များသည်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က SEBI ကအိန္ဒိယရှိရှယ်ယာအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ AML သာမက KYC နှင့်ရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်းများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသည့်အတွက်အကျိုးဆောင်အတွက်ရူပီး ၁.၁ သန်းဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
ပွဲစားများအားလုံးသည်ပိုင်ဆိုင်မှုမတူကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်လုံးဝအာရုံစိုက်လိုသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိပါကပွဲစားသည်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည်ဥပမာအားဖြင့် cryptocurrencies ကိုသာအဓိကထားပြီးအခြားသူများမှာမူသင်ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစာရင်းတစ်ခုလုံးရှိသည်။
သငျသညျလှုံ့ဆော်မှုအချို့ပေးဖို့, ငါတို့အိန္ဒိယဖော်ရွေကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း eToro မှာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုစာရင်းပြုစုပါတယ်။
ယနေ့ထိကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုများစွာခံရသည်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့သူတို့မှာတကယ့်လက်တွေ့ဘ ၀ မှာမြင်သာထင်သာရှိတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုရှိတယ် ရှေ, ငှေ, စွမ်းအင်နှင့် ဆီ.
နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုများနှင့်ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်များသည်စျေးကွက်အပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည်။ ဥပမာအမေရိကန်သည်အီရတ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ချိန်တွင်ကမ္ဘာ့ရေနံတင်ပို့မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မာကျောပြီးအပျော့စားအကြားခွဲခြားထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ပျော့ပျောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများသည်ကြီးထွားလာသည့်အရာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံ 'အစားအစာနှင့်အမျှင်ကုန်ပစ္စည်းများ' သို့မဟုတ် 'အပူပိုင်းဒေသကုန်စည်များ' အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။
ခက်ခဲသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ထုတ်ယူရန်သို့မဟုတ်တူးရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုများသောအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။
အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည် အခြေခံ၍ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကစတော့ရှယ်ယာများသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲများ၊ သတင်းများ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ဝင်ငွေရရှိမှုအစီရင်ခံစာများကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကြောင့်စတော့ရှယ်ယာတိုင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ဤအထူးစျေးကွက်သည်တကယ်ကိုတက်ကြွနေသည်။
သင်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်ကြီးမားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ အိန္ဒိယကုန်သည်များနှင့်လူကြိုက်များသောစတော့ရှယ်ယာအချို့ဥပမာ - GoPro, Ford, Apple, Amazon, Disney, Tesla နှင့်အခြားထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယတွင်စတော့ရှယ်ယာများရောင်း ၀ ယ်သောအခါ - သြဇာသက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲရှည်လျားသော (၀ ယ်ယူရန်) အနေအထားကိုဖွင့်ခြင်းသည်သင်၏နောက်ခံရှိသောစတော့ရှယ်ယာတွင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြသသည် - ထို့ကြောင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင့်နာမည်ဖြင့်ဝယ်ယူလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာရှိတယ် CFD ကုန်သွယ် အရာကျနော်တို့လာမယ့်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ဥပမာ eToro ကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်အိန္ဒိယလူမျိုးများကို CFD များကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်များအနေဖြင့်တိုတောင်းသော (ရောင်းရန်) ရာထူးများကိုဖွင့်နိုင်သည်။
SEBI ပွဲစားကိုအသုံးပြုသည့်အခါ RBI အရ၊ သြဇာကိုခွင့်မပြုကြောင်းသတိပြုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း - အိန္ဒိယကုန်သည်အများစုသည်ယူကေ၊ အီးယူ၊ သြစတေးလျသို့မဟုတ်စင်္ကာပူတို့ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်လိုင်စင်ရထားသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုသည် Bitcoin အကြောင်းကြားဖူးကြသည်။ အမှန်တကယ်တွင်မတူညီသော cryptocurrencies ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုမိုဖန်တီးထားသည်။
ဤတွင်အိန္ဒိယ၌ရရှိနိုင်ကြောင်းအများဆုံးကုန်သွယ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုဒီမှာ။
Bitcoin (BTC) ။
Litecoin (LTC) ။
အီ (USDT) ။
Monero (XMR) ။
Ethereum (ETH) ။
Bitcoin SV (BSV)။
Bitcoin ငွေ (BCH) ။
ထို့အပြင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေကိုမစွန့်စားမီဆန္ဒပြအကောင့်တစ်ခုတွင် cryptocurrencies ကိုစတင်ပြီးစတင်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။
စတော့ဈေးကွက်တစ်ခုချင်းစီတွင် ၄ င်း၏ကိုယ်ပိုင်“ အညွှန်း” သို့မဟုတ်“ ညွှန်းကိန်း” မျိုးစုံရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်စျေးကွက်၏ကဏ္ section ၏သဘောသဘာဝကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ညွှန်းကိန်းများကိုမတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်သီးခြားစတော့များထက်အနည်းငယ် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်ဟုယူဆကြသည်။
အထူးသဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနှင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သောအခါ၎င်းသည်အညွှန်းကိန်းတစ်ခုလုံးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ eToro ကဲ့သို့သောအချို့သောပလက်ဖောင်းများတွင်၊ ညွှန်းကိန်းများကို CFDs များအဖြစ်ရောင်းဝယ်သည် (အပေါ်တွင်ကြည့်ပါ)၊
ရေပန်းစားသောအညွှန်းကိန်းများတွင် S&P 500, FTSE 100, NASDAQ 100 နှင့် Dow Jones 30 တို့ပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပေါ်ကုန်သွယ်မှုနိုင်ရန်အတွက် Forex ဈေးကွက်ခင်ဗျားနောက်ကွယ်ကပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ အိန္ဒိယတွင်သင်သည် INR (Indian Rupee, .t) တို့ပါဝင်သော Forex အတွဲများကိုသာကုန်သွယ်နိုင်သည်
ဥပမာများမှာ EUR / INR၊ USD / INR, JPY / INR နှင့် GBP / INR ။
Forex တွင်ငွေကြေးအတွဲ (၃) မျိုးရှိသည်။ ထူးခြားချက်၊ ဒီမှာပါ အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏နမူနာများ
ထူးခြားဆန်းပြား FX အတွဲများ - USD / HKD, AUD / MXN, NZD / SGD, EUR / TRY, GBP / ZAR နှင့် JPY / NOK
Major FX အတွဲများ USD / JPY, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, GBP / USD, NZD / USD နှင့် USD / CHF
အသေးစား FX အတွဲများ - EUR / AUD, NZD / JPY, EUR / GBP, GBP / JPY, GBP / CAD နှင့် CHF / JPY
အချို့သောအိန္ဒိယကုန်သည်များသည်အိန္ဒိယမှငွေလွှဲပြောင်းရန် Skrill နှင့် Neteller ကဲ့သို့သော e-ပိုက်ဆံအိတ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ eToro ကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကုန်သွယ်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ကောင်းသော SEBI ပွဲစားကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း၊ ပြည်ပပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရန်သင်သည်၎င်းတို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရန်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများအားလက်ခံရန်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရန် ဦး စွာသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော SEBI ပွဲစားများမရှိပါ။ သို့သော် SEBI မှအသိအမှတ်ပြုသည့်ပွဲစားများသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများအားကမ္ဘာပေါ်ရှိစျေးကွက်များ၌၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်မှကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်စေရန်ကူညီပေးသည်။
ပွဲစားများအားအနည်းဆုံး FCA (သို့) ASIC ကဲ့သို့သောအခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ရန်သေချာစေရန်လည်းအကြံပေးလိုပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ရန်ပုံငွေကာကွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ eToro သည်အိန္ဒိယတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသော SEBI ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင် ပွဲစား။ ၎င်းကို FCA, ASIC နှင့် CySEC တို့ကထိန်းချုပ်သည်။
သင်သည် USD/INR အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့။
သင့်ပွဲစားသည် ကော်မရှင်ခ 0.6% ကောက်ခံပါသည်။
ဤအခြေအနေတွင်၊ ပွဲစားသည် $12 ကော်မရှင် ($ 2,000 – 0.6% = $1988) ကို ယူပါမည်။
ကောင်းမွန်သောသတင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည် SEBI ပွဲစားများ (သို့မဟုတ်အင်ဒီးယန်းများကိုလက်ခံသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) ကိုသာသင့်အားကော်မရှင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်အကြံပြုခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သည်အသစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုအပေါ်၌သာသင်၏အာရုံကိုအာရုံစိုက်ချင်ပေလိမ့်မည်။ သင်စျေးကွက်များတွင်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အစုစုကိုအမျိုးမျိုးခွဲခြားရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုရန်သင်ရွေးချယ်ရန်မတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။
ပွဲစားနှစ် ဦး နှင့်အတူတူမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ဥပမာအားဖြင့် Forex ကိုသာအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပါကပွဲစားကကမ်းလှမ်းသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ဥပမာ eToro ကိုအသုံးပြုခြင်း - အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများသည်အောက်ပါငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ eToro ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင် USD ကိုအပ်နှံရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သို့မှသာပြောင်းလဲမှုအခကြေးငွေ (၀.၅%) သာပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအချို့သောအိန္ဒိယကုန်သည်များသည် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets များကို အသုံးပြု၍ အိန္ဒိယဘဏ်မှငွေမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုသက်ရောက်နိုင်သည့်ကော်မရှင်ကြေးများသာမကပြန့်ပွားမှုများသည်လည်းကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သတိမထားမိတဲ့သူတွေအတွက်၊ ပျံ့နှံ့ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုသုံးပြီးပုံဖော်ထားသည်pips'' ။ Pips ဆိုသည်မှာ“ ၀ ယ်ခြင်း” ဈေးနှင့်ရောင်း ၀ ယ်သည့်ပစ္စည်း၏ရောင်းဈေးနှင့်ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
USD/INR မှာ ဝယ်ဈေး 68.8000 ရှိတယ်ဆိုပါစို့။
တူညီသောအတွဲသည် ရောင်းစျေး 68.8004 ရှိသည်။
ဤအခြေအနေတွင်၊ USD/INR သည် စျေးနှုန်းနှစ်ခုကြားကွာဟချက်ကို ကိုယ်စားပြုသောကြောင့်4pips ပျံ့နှံ့မှုရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို4pips ဖြင့် အရင်းကျေရန် လိုအပ်သည်။
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် SEBI ပွဲစားများနှင့် ကပ်၍ တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်စရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်သေချာစေသည်။
အိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဖောက်သည်များအားနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုပေးသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုနှင့်ဇယားဖတ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကိရိယာများပိုကောင်းလေ၊ အထူးသဖြင့်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုတွင်ဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်အစွမ်းသတ္တိအညွှန်းကိန်း (RSI) ။
အဆရွေ့လျားပျှမ်းမျှ (EMA) ။
စုဆောင်းခြင်း/ဖြန့်ဝေလိုင်း (A/D လိုင်း)။
Moving ပျမ်းမျှ convergence မတူကွဲပြား (MACD) ။
On Balance Volume Indicator (OBV)။
သင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေလျှင်ပွဲစားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတွေ့ရှိသောပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများသည်အသက်ကယ်သမားဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အားလုံး၏ကုန်သည်များသည်စျေးကွက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ဇယားများနှင့်အချက်ပြကိရိယာများဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်၊ သို့မှသာသင်ရရှိနိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရစျေးနှုန်းပုံစံများနှင့် backtesting graph များကိုမည်သို့နားလည်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်အနာဂတ်၌စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်နောက်တစ်ခုမှာသရုပ်ပြအကောင့်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်ကြိုးမဆိုသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ကြမ်းပြင်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ပွဲစားသည်ယူကေတွင်အခြေစိုက်ပါက - သင်သည် ၄ ​​နာရီခွဲကြာလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။ အကယ်၍ သင်၏ပွဲစားသည် ၀ ါရှင်တန်တွင်အခြေစိုက်ပါကသင်သည် ၉ နာရီခွဲခန့်ရှေ့တွင်ရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်၏ပွဲစားပလက်ဖောင်းသည်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိအဆက်အသွယ်ပုံစံစသည်တို့ကဲ့သို့သောဖောက်သည်များပံ့ပိုးမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးလျှင်ဤအကြောင်းကြောင့်သင်အနေဖြင့် ပို၍ ကောင်းသည်။ ပြည့်စုံသောမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကဏ္ with ပါသောကုမ္ပဏီသည်အကူအညီ ၂၄/၇ မရပါကအလွန်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
SEBI တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ပွဲစားကုမ္ပဏီ ၃၀၀ ခန့်သည်အိန္ဒိယတွင်ရှိပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများသည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အခြေစိုက်လေ့ရှိသည်။
သင့်တော်သော platform တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်စိတ်အားတက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည် သငျသညျဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းပွဲစား5ဦးကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့်၊ FCA, ASIC နှင့် CySEC.
သင်သုတေသနအချို့ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်သင်၏ကမ္ဘာ့နေရာမှဖောက်သည်များကိုလက်ခံသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုတွေ့သောအခါ (ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသော ၅ ကဲ့သို့) သင်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
အဆင့် ၁ - အကောင့်တခုဖွင့်ပါ
သင်မစတင်မီ သက်ဆိုင်ရာ အရစ်ကျသို့ အကောင့်ဖွင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သွား၍ 'အကောင့်ဖွင့်ပါ' ကိုနှိပ်ပါ။
ဤနေရာတွင်သင်၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ အိမ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ထူးခြားသောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလည်းသင်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၂။ မိမိကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမျက်နှာကို KYC ၏အရေးကြီးပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းဥပဒေများကတင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးပွဲစားများအားလုံးသည်သင်၏အိန္ဒိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ID ကဒ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောင်းခံပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက်ပွဲစားကသင့်အမည်နှင့်လိပ်စာအပြည့်အစုံပါသောမကြာသေးမီကငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်ခု၏ဓာတ်ပုံကိုတောင်းလိမ့်မည်။ အခွင့်အလမ်းများသင်ယခင်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လစာစသည့်သင်၏ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအချို့ကိုဖြေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၄: ကုန်သွယ်ရေးစတင်ပါ
2022 ၏အကောင်းဆုံး SEBI စည်းမျဉ်းပွဲစားများ
ထို့ကြောင့်အိန္ဒိယအနေဖြင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုသင်ရှာဖွေသောအခါသင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်မက်ထရစ်များအားလုံးကိုသတိပြုမိပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိန္ဒိယဖောက်သည်များကိုလက်ခံသည့်ထိပ်တန်း ၅ ခုသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားများစာရင်းကိုအတူတကွထားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်။
၄။ AvaTrade - အရင်ကဆိုရင်အကောင်းဆုံး
AvaTrade သည်ကုန်သည်များကြားတွင်လူသိများသောပွဲစားဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှု၊ ရွေးချယ်စရာများ၊ ETFs၊ cryptocurrencies နှင့်ငွေချေးစာချုပ်များစသည့်တူရိယာမျိုးစုံကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
ရွေးချယ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ထောင်ကျော်ရှိသည့်အပြင်ဤပလက်ဖောင်းသည်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုဘာသာစကား (၁၅) မျိုးပါရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါက၊ AvaTrade ပလက်ဖောင်းတွင်သင်အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်နှင့်ဖုံးထားသည်။
ကုမ္ပဏီတွင်ကိုယ်ပိုင် AvaTrade GO ဟုခေါ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းရှိသည်။ ၎င်းကို Android အတွက် Google Play နှင့် iOS အသုံးပြုသူများ၏ App Store မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ကောင်းမွန်သော MetaTrader4 ကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
AvaTrade GO အက်ပလီကေးရှင်း
၃။ Capital.com - ကြေးနီအပေါ်ကော်မရှင်၏လွတ်လပ်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျံ့နှံ့မှု
Capital.com သည် သင့်အား ကုန်စည် CFDs များမှတစ်ဆင့် ကြေးနီကို ရောင်းဝယ်နိုင်စေပါသည်။ သို့မဟုတ်၊ သင်သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB မှ အတည်ပြုထားသော Southern Copper Corp ကဲ့သို့သော ကြေးနီတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများ၏ စတော့ရှယ်ယာ CFDs များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။
အချိန်တိုလေးစားရသော Capital.com ၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ကုန်သည်အသစ်များအတွက်အရင်းအမြစ်များစွာမှမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် CFD သရုပ်ပြအကောင့်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးသင်တန်းများနှင့်ပညာရေးဗီဒီယိုများပါဝင်သည်။
Capital.com သည်ပွဲစားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အားကြေးနီကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအတွက်လုံးဝ ၀ န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။ သင်၏ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းစသည့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းသူတို့ကဖုံးအုပ်ထားသည်။
သင်သာဒီပလက်ဖောင်းမှာအလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သောပျံ့နှံ့ငွေပေးချေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၀၊ ပေါင် ၂၀ သို့မဟုတ်ယူရို ၂၀ ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယတွင်လူ ဦး ရေ ၁.၄ ဘီလီယံနီးပါးရှိပြီးလူ ဦး ရေသန်း ၂၀ ခန့်သာကုန်သွယ်နေကြသည်။ သူကဆိုပါကကမ္ဘာအ ၀ ှမ်း COVID-1.4 ကူးစက်မှုကြောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံခဲ့ရသည့် အချိန်မှစ၍ ယခုအရေအတွက်တိုးပွားလာနေပုံရသည်။
အိန္ဒိယတွင်ပွဲစားများကို SEBI မှထိန်းချုပ်သည်။ သို့သော်ခန္ဓာကိုယ်သည်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါ။ စင်စစ်အားဖြင့် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်သာအေဂျင်စီအားစတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ (ရူပီးမပါဘဲ) FX ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုတရားမဝင်ကြောင်းနှင့်ထို့ကြောင့်အိန္ဒိယတွင်အပြစ်ပေးပြစ်မှုကြောင်းပြီးသားဖော်ပြခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်မဟုတ်။ အိန္ဒိယရှိကုန်သည်များသည် Skilling, Capital.com နှင့် AvaTrade ကဲ့သို့သောကျော်ကြားပြီးကျော်ကြားသောပြည်ပပွဲစားများမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
ပွဲစားတစ် ဦး ကိုမရွေးချယ်မီသုတေသနအချို့ကိုအမြဲပြုလုပ်ပါ၊ စင်မြင့်ကိုတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှထိန်းညှိထားပါ။ အိန္ဒိယဖောက်သည်များလက်ခံမှုသေချာစေရန်နှင့်အခကြေးငွေများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။
SEBI သည် '' အိန္ဒိယ Securities and Exchange Board of India '' အတိုကောက်ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့သည်အိန္ဒိယရှိဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
FCA, ASIC နှင့် CySEC စသည့်အဖွဲ့အစည်းများကထိန်းချုပ်ထားသည့်ပွဲစားများနှင့်သာသင့်အားအကြံပေးလိုပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာသင်၏ရန်ပုံငွေများကိုထိပ်တန်းအလွှာများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ပွဲစားများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ နှင့်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှု။
စည်းမျဉ်းခံ ပွဲစားများအားလုံးသည် မေးခွန်းထုတ်သော ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် သီးခြားကိုယ်ထည်၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို မြင်နိုင်စေသည်။ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ ကုမ္ပဏီနှင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဟုတ်သည်။ အကယ်၍ သင်ရူပီးကိုမပါ ၀ င်သော Forex အတွဲများနှင့်ရောင်းဝယ်ပါက၎င်းသည် Bailable မဟုတ်သောပြစ်မှုဖြစ်သည်။
ငါအိန္ဒိယရူပီးနှင့်အတူ eToro အပေါ် Forex ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
မဟုတ်ပါ။ eToro သည်သင်၏အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်သာကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်သတင်းကောင်းမှာ eToro သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအ ၀ င်နေရာပေါင်း ၆၀ ကျော်မှဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုသည်။ သင်ရုံပြောင်းလဲခြင်းအခကြေးငွေ 60% ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။